Kanneen Oromiyaa fi Beenishaangul Irraa Buqqa’an Walloo Kibbaa Dhaqqabuun Gabaasame
Ebla 01, 2021
Faayilii - namoota tanaan dura Benishaangul Gumuz irraa buqa'an
Oromiyaa fi naannoo Beenishaanguul keessa kanneen jiran dhalattoonni Amaaraa rakkoo nageenyaa naannoo sanatti umameen qe’ee irraa buqa’anii godina walloo kibbaa seenuu isaanii waajjirri ittisa balaa fi wabii nyaataa beeksisee jira.
Itti gaafatamaan waajjirichaa obbo Mesaay Maaruu VOAf akka ibsanitti naannoo Oromiyaa Walllaggaa fi Beenishaangl keessaa sababaa nageenyaaf jecha qe’ee irraa kan godhaanan dhalattoonni Amaaraa 827 qabeenyaa fi mana dhiisanii guyyoottan sadan darban Walloo kibbaa seenan jedhan.
Kana dura naannoo sana irraa ergamee kan ture deggersi nyaataa fi kan nyaataa hin ta’in buqqaatota kanaaf ergamuu ibsaniiru. Haa ta’u malee akka baay’ina isaaniitti deggersichi ga’aa miti jedhan.
Hanqina sana guutuu dhaan jiraattonni magaalaa Dasee keessumaa deggersa dargaggoonni godhan galateeffataniiru.
Qindeessaan komaand poostii naannoo benishangul Gumuz, letenaa jeneraal Asraat Deneeroo yaaddoos ta’e qe’ee irraa buqqa’uun naannoo dhiisanii deemuuun jiraachuu amananii, kanneen qe’ee ofii irraa godaanan deebisuuf hojjetamaa jira jedhan.
Dhimma Tigiraay Irratti Ibsa Awustiraaliyaa
Bulchiinsi Naannoo Amaaraa Waldaaleen Siivikii Dhimma Filannoo Irratti Hojjetanii Hanqina Bajataa Qabaan Jedha
Koreen Filannoo Biyyaalessaa Hundeessamuun Ibsame
Qondaalonni ABO Lama Manni-murtii Akka Hiikaman Ajaje Ammallee Hin Hiikamne, Jedhu Abukaatoon Isaanii
Qabiinsii Mirga Namoomaa Bara Dabree Maal Fakkaata Turee?